Yasri Khan oo la noqday musharaxnimadii golaha sare ee Miljöpartiet - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Yasri Khan oo la noqday musharaxnimadii golaha sare ee Miljöpartiet
La daabacay fredag 22 april 2016 kl 12.00
Soomaalida oo ku kala jaban doodda ka aloosan MP
Xamsa Cumar. Foto: Kenadid Mohamed/SR
Yasri Khan (MP).
Yasri Khan (MP) drar tillbaka sin kandidatur till partistyrelsen. sawir: TT och Sveriges Radio
﻿Yasri Khan, oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga Miljöpartiet una sharaxnaa golaha sare ee xisbiga ayaa hadda dib ula noqday musharaxnimada, iskagana harey siysaadda. Kadib markii lagu dhaleeceeyey haweenka oo uusan gacanta ka salaamin.
Maanta sida dooda bulsha u socoto waxay i tustay in aysan wacneyn siyaasadda innaan ka qayb-gaato. Waxay salka ku heysaa waxii lagula kacay Mehmet Kaplan(wasiir dhawaan iscasilay), taas xiisahii siyaasadda aan u hayey iga dhumisay, waayo Kaplan waxaa loo muujiyey ruux ay farta ku godan tahay oo tuhun laga qabo. Anniga waxaa su’aalo laga keeney waxaa aaminsanahay iyadoo loo marayo qaabka aan dadka u salaamo. Marka waxaa iga dhumay xiisahii siyaasadda, ayuu yeri.
Khan ayaa difaacay Mehmet kaplan wasiirk guryeynta ee dhawaan iscasilay, laakiin waxay tani timid markii uu diidey gacanta in uu ka salaamo wariyed ka socotay telefishinka TV4 oo kadibna dhaleeceyno badan uga yimaadeen gudaha xisbigiisa iyo dibaddiisaba.
Dadka noocyo kalo duwan ayey isku salaamaan. Muhiimadda waa in lays xushmeeyo marka la kulmo ama la wadoshaqeynayo, ayuu yeri Yasri Khan.
Joakom Larsson ka mid ah guddiga doorashada ee xisbiga Miljöpartiet ayaa Ekot u sheegay in uu kalo hadlay Khan go’aankiisa, sidoo kalena waxuu xaqiijiyey in uu jiro dhleecen badan xisbiga guddahiis oo laga keeney ninkan.
- Ujeedadiisu waa in uu ka noqdo musharadnimada. Waqtiyadii ugu denbeeyey ayuu ka fikiray xaaladda iyo waxii dhacay waxuuna go’aansaday in uu ka noqdo musharaxnimada. Weyna jirtaa in xisbiga gudahiis laga muujiyey gilgilsho markan ku talinay in golaha sare lagu Khan, ayuu yeri Joakim Larsson
Guddiga doorashada ee xisbiga horey way ula socdeen in Yasri Khan dumarka gacanta ku salaamin markii ay sharaxayeen in uu ka mid noqdo golaha sare ee xisbiga, laakiin Jaokim Larsson waa uu ka gaabsaday in uu sharaxa sida ay u fikirayeen markii ay ninkan u sharaxyeen golaha fulinta. Waxuuna ku gaabsaday in Yasri Khan la noqday musharaxnimadiisa. Dad badan ayaa su’aalo ka keenay sida ay isku qaban karto Yasri Khan in uusan dumarka gacanta ka salaamin siyaasadda Miljöpartiet ee ku dhisan mabda’a sinaanta ragga iyo dumarka.